Muuri News Network » DAAWO SAWIRADA: Dad isku Qoys ahaa oo mar qura Toogasho lagu dilay….
DAAWO SAWIRADA: Dad isku Qoys ahaa oo mar qura Toogasho lagu dilay….
Baadiyaha Gobolka Ohio ee dalka Mareykanka toogasho ka dhacday afar goob oo kala duwan ayaa waxaa lagu dilay dad badan oo isku qoys ahaa, waxaana weerarka kadib baxsaday kooxihii dilalkaasi fuliyay.
Inta la xaqiijiyay 8-qof oo isku qoys ahaa ayaa lagu dilay toogashada ka dhacday Baadiyaha gobolka Ohio ee dalka Mareykanka , waxaana dadkan la laayay oo xiligaa ku sugnaa goobo kala duwan loogu tagay kadibna lagu dilay.
Dadkan la laayay ayaa 7-kamid ah waxa ay ahaayeen dad waa weyn, waxaana ku jiray wiil 16-sano jir ahaa, waxaana weerarkan ka bad baaday sadax caruur ah oo katirsanaa Qoyskan lagu laayay Baadiyaha Ohio.
Saraakiisha amaanka ee gobolka Ohio ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan ku aadan dilkan loo geestay dadkan isku qoyska ahaa, waxa ayna saraakiisha sheegeen in ay baxsad ku jiraan kooxihii dilka ka dambeeyay.
Dalka Mareykanka waxaa ka dhaca toogashooyin ay dadka isku geestaan, walina lama oga waxa uu salka ku hayo toogashadan cusub ee ka dhacday dalka Mareykanka laguna beegsaday dad badan oo isku qoys ahaa.